MyanPay’s Buyer Protection Policy is the policy that protect not to loss and not to cause the frauds by hackers from Online for buyer/sender.
Rules for Buyer/Sender for Buyer Protection Policy
MyanPay automatically protects with Buyer Protection Policy for payment transactions in online shopping websites.
If you recheck these transactions in your MyanPay account, you will see them as “Send Money For Goods (via Express Checkout/ Buy Now/ Pay Now/ Add To Carts)”.
If you want to cash from your MyanPay account directly for buying products from merchant and getting services from service provider, you have to use “Send Money For Goods” or “Send Money For Service”.
And then your account will get the protection with Buyer Protection Policy for direct payment and transfer.
Briefly, in order to get the protection with Buyer Protection Policy for Buyer/Sender using MyanPay, payment transaction must be “Send Money For Goods” or “Send Money For Service”.
Besides, MyanPay will send One-Time Password (OTP) to your email or mobile SMS to confirm every payment transaction with MyanPay.
MyanPay will continue other payment process after confirming your payment by adding One-Time Password (OTP) sent from MyanPay.
MyanPay will send payment transaction to your email after finishing these payment processes.
You have to save that email without deleting.
Getting Protection and Solving Dispute using Buyer Protection Policy
Customers can get protection not to lose the finance by using MyanPay’s Buyer Protection Policy if the customer face with the lack of purchased item, wrong product sent from merchants, lack of satisfaction and services.
To get these protection, customers need to complain to Problem Solving Center within three days after payment. (The usage of MyanPay’s Problem Solving Center can be learned here Click).
Unless customers complain within3days, MyanPay will not solve.
Details of Buyer Protection Policy and problem solving can be learned here.
MyanPay ၏ Buyer Protection Policy ဆိုသည်မှာ Online မှ ဈေးဝယ်ယူမှုများအတွက် ငွေပေးချေမှုများတွင် ငွေပေးပို့သူ (Buyer/Sender) အတွက် Online မှတဆင့် မသမာသူများမှ လိမ်လည်မှုမရှိစေရန် နှင့် ငွေပေးပို့သူဖက်မှ နစ်နာမှုမရှိစေရန် ကာကွယ်ပေးထားသော Buyer Protection Policy ဖြစ်ပါသည်။
Buyer Protection Policy နှင့် ပတ်သက်၍ ငွေပေးချေသူ၊ ငွေပေးပို့သူ (Buyer/Sender) ဘက်မှ လိုက်နာရမည့် အချက်များ
MyanPay အသုံးပြု၍ Online Shopping Website များတွင် ငွေပေးချေမှုများ ပြုလုပ်ပါက Buyer Protection Policy ဖြင့် အလိုအလျောက် ကာကွယ်မှုပေးထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ထို Transaction များအား လူကြီးမင်း၏ MyanPay အကောင့်တွင် ပြန်လည်စစ်ဆေးပါက “Send Money For Goods (via Express Checkout / Buy Now / Pay Now / Add to carts)” စသဖြင့် ဖော်ပြပေးထားပါလိမ့်မည်။
အကယ်၍ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အခြားသူ တစ်ဦးတစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) Merchant ထံမှ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်း၊ (သို့မဟုတ်) Service Provider ထံမှ ၀န်ဆောင်မှုရယူခြင်းတို့အတွက် လူကြီးမင်း၏ MyanPay အကောင့်မှ တိုက်ရိုက်ငွေပေးပို့၍ ငွေပေးချေလိုပါက “Send Money For Goods” (သို့မဟုတ်) “Send Money For Service” လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုရပါမည်။
ထိုသို့ အသုံးပြုမှသာ တိုက်ရိုက် ငွေပေးချေခြင်း၊ ငွေလွှဲခြင်းတို့အတွက် Buyer Protection Policy ဖြင့် ကာကွယ်မှု ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
အကျဉ်းချုံးအနေဖြင့် MyanPay အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေသူ၊ ငွေပေးပို့သူ (Buyer/Sender) သည် Buyer Protection Policy ဖြင့် ကာကွယ်မှု ရရှိစေရန်အတွက် ငွေပေးချေမှု Payment Transaction တိုင်းသည် “Send Money For Goods” (သို့မဟုတ်) “Send Money For Service” ဖြစ်ကြောင်း သေချာမှုရှိရပါမည်။
ထို့ပြင် MyanPay အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေမှု Transaction တိုင်းတွင် ငွေပေးချေမှု အတည်ပြုချက်အား သင့်ထံသို့ Email (သို့) Mobile SMS ဖြင့် One Time Password (OTP) ပေးပို့၍ အတည်ပြုချက် ရယူပါမည်။
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် MyanPay မှ ပေးပို့လိုက်သော One Time Password (OTP) ကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီးပါက သင်၏ ငွေပေးချေမှု သေချာကြောင်း အတည်ပြုမှတ်ယူ၍ ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြီးစီးသွားပါက သင်၏ ငွေပေးချေမှု မှတ်တမ်းအား MyanPay မှ သင်ထံသို့ Email ပေးပို့ပါမည်။
ထို Email အား ဖျက်မပြစ်ဘဲ သိမ်းဆည်းထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
Buyer Protection Policy အား အသုံးပြု၍ ကာကွယ်မှု ရယူခြင်း၊ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းခြင်း
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် MyanPay အသုံးပြု၍ ငွေပေးချေပြီးနောက် ဝယ်ယူလိုက်သော ကုန်ပစ္စည်း ရောက်ရှိမလာခြင်း၊ ဈေးရောင်းသူ (Merchant) ဘက်မှ ပေးပို့လိုက်သော ကုန်ပစ္စည်းမှာ မှန်ကန်မှု မရှိခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု မရရှိခြင်း၊ စိတ်ကျေနပ်မှု မရှိခြင်း စသည့် အဆင်မပြေမှုများရှိပါက MyanPay ၏ Buyer Protection Policy အား အသုံးပြု၍ ငွေကြေးဆုံးရှုံးနစ်နာမှု မရှိစေရန် ကာကွယ်မှု ရယူနိုင်ပါသည်။
ထိုသို့ ပြုလုပ်ရန်အတွက် Online မှ ဈေးဝယ်ပြီးနောက် (သို့မဟုတ်) ငွေပေးချေပြီးနောက် (၃) ရက်အတွင်းတွင် လူကြီးမင်း၏ MyanPay အကောင့်အတွင့်းရှိ Problem Solving Center မှတဆင့် Complain တက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (MyanPay ၏ Problem Solving Center အသုံးပြုနည်းအား ဤနေရာတွင် Click နှိပ်၍ လေ့လာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ငွေပေးချေပြီးနောက် (၃) ရက်အတွင်း Complain တက်ခဲ့ပါက (သို့မဟုတ်) အကြောင်းကြားခဲ့ပါက Buyer Protection Policy အရ MyanPay မှ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးမည် ဖြစ်ပြီး (၃) ရက်အတွင်း အကြောင်းမကြားခဲ့ပါက ဖြေရှင်းပေးမည် မဟုတ်ပါ။
MyanPay ၏ Buyer Protection Policy အသေးစိတ်နှင့် အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းခြင်း Problem Solving လုပ်ဆောင်ပုံများကို သိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင် အသေးစိတ် ဆက်လက် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။